Openwork गर्मी ब्लाउज (हुक) योजना र वर्णन बुनाई
न्यानो मौसम को लगभग अनिवार्य knitters को बाँध्न मा एक पुनरुद्धार कारण हुनेछ। यो एक रोचक यार्न गुणस्तर काम र नयाँ ढाँचाको विकास गर्न सुन्दर कुराहरू आफ्नो दराज भर्न आफ्नो इच्छा, एकदम स्पष्ट छ। सबैभन्दा लोकप्रिय खुला-काम उत्पादनहरु को एक सिर्जना गर्न आवश्यक भएको रेखाचित्र र गर्मी ब्लाउज, सम्बन्धित crochet को विवरण।
जैकेट के हो र यसलाई के हुन सक्छ
वास्तवमा, ज्याकेट अघि विवरण सम्पूर्ण उचाइ मार्फत पारित एक बांधनेवाला संग माथिल्लो शरीर लागि वस्त्र भनिन्छ। अभ्यास, त्यसैले कल र, र सबै भन्दा माथि-ओभरमा पुल।
शास्त्रीय गर्मी ब्लाउज हुक (रेखाचित्र र वर्णन hereinafter आउने) कपास, लिनन, Viscose वा कृत्रिम यार्न बनेको छ। गैर-प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग बारेमा कुरा, यो एक्रिलिक अत्यन्तै खराब छ भन्ने उल्लेख लायक छ। यस्तो फिलामेंट्स देखि उत्पादन चिसो मौसममा गरम र न्यानो हट बन्न छैन। तपाईं सिंथेटिक्स देखि पाल्नु गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो Microfiber वा पलियामाइड बस्नका लागि राम्रो छ। रेशम मुद्दा को नजर को नकल रूपमा तिनीहरूले पनि हेर्न रोचक।
केही सरल ढाँचा सम्पूर्ण वेब मस्यौदा व्यक्तिगत रूपांकनों को लेख वा विभिन्न तरिकाहरू संयोजन को गठन - यदि एक गर्मी ब्लाउज crochet मा एक फिट छ तीमध्ये सबै, उपयुक्त छ। शुरुआती लागि ड्राइभिङ र विवरण बुनाइ लागि धेरै पत्रिकाहरू उपलब्ध छन्।
आस्तीन संग Openwork ज्याकेट
लेखको सुरुमा फोटो मा उत्पादन तस्वीर, सार्वभौमिक सकिन्छ। यस गर्मी ब्लाउज हुक (रेखाचित्र र वर्णन पछि दिइनेछ) एक पोस्टर nakida र उपरि लूपहरूको एक अवधारणा छ कि कुनै पनि कुशल कामदार लिङ्क गर्न सकिन्छ।
सामान्य उत्पादन डिजाइन निम्न विवरणहरू समावेश:
भागहरु अघि र पछि। त्यो एक-टुक्रा ब्लेड बुना।
यहाँ यो गर्मी ब्लाउज crochet कसरी बनाउन छ। रेखाचित्र र पनि शुरुआती craftswomen लागि बुझ्ने मोडेल को विवरण। को भागहरु को आकार र स्थान स्पष्ट प्रस्तुत ढाँचा देखिने छन्।
संख्या आकार को एक विस्तृत श्रृंखला देखाउँछ कि धेरै सुविधाजनक। यो बोनस infrequently पतन, र त्यो यसको विशेष मूल्य यो वृद्धि वा उत्पादन कम गर्न मद्दत गर्छ। अक्सर, आत्म परिवर्तन कमी परेशान अनुपात र छाँयामा कुरूप ब्लाउज हुन्छन्।
यदि चाहेको लम्बाइ कुनै पनि कारण लागि अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ।
यो मोडेल SC संग सरल राउन्ड स्तम्भहरू सम्बन्धित एक coquette लागि प्रदान गर्दछ। कुशल कार्यकर्ता र यसको सुझाव को क्षमता आधारमा कुनै पनि अन्य ढाँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पहिलो पङ्क्ति यसको लम्बाइ मात्रा अगाडी बढन छ, टाँका एक श्रृंखला छ। यसबाहेक, बाह्र उत्तिकै स्पेस अंक मा वाहेक पूरा, स्तम्भहरू nakida एक नम्बर संगत गर्न। कपडा विस्तार सर्तहरू कंपित छन् बदलता, प्रत्येक पंक्ति मा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। तपाईं नै ठाउँमा स्तम्भहरू वाहेक छ भने, तपाईं अनियमित आकारहरू एउटा सर्कल प्राप्त र कोण स्पष्ट देखिने छन्।
त्यसैले, तपाईं अन्त मा, काम गर्न पूर्ण राउन्ड जुवा बाहिर हुनेछ जारी गर्नुपर्छ।
गर्मी ब्लाउज (हुक) योजना र मुख्य टुक्रा बुनाई को विवरण
सुरुमा तल देखाइएको योजना अनुसार, दुवै backrest र समतल forehand छ openwork कपडा बुनाई सञ्चालन।
यसलाई अन्यथा हामी धेरै, धेरै भंग गर्न धेरै हुनेछ, आकार संग गलत हुन महत्वपूर्ण छ। गणना को सबै भन्दा राम्रो तरिका नियन्त्रण नमूनाको सही कार्यान्वयन छ।
त्यहाँ स्पष्ट सम्बन्धित रेखाचित्र र गर्मी ब्लाउज को वर्णन, crochet छ, र त्यसपछि कसरी स्ट्रिप्स वेब बाँकी गर्न समानान्तर बुनना गर्न।
उत्पादन को चयन मुद्दा र आकार को मोटाइ आधार मा दोहोरिने ढाँचा आवश्यक छ। को भागहरु को उचाइ भएको योजना आकार बराबर गर्दा, यो तयार छ। ठीक - अब तपाईं निम्नानुसार, र घाँटी, एक ठूलो ढाँचा तल किनारा बाँध गर्न आवश्यक छ।
गर्मी लागि स्लिभ ब्लाउज
को yardsticks हटाउने प्राप्त sleeveless बुनना आकार विवरण। ढाँचाको वितरण क्रम पनि forehand र फिर्ता भागहरु लागि जस्तै हो।
सबै भागहरु तयार छन्, तिनीहरू stapled गर्न सकिन्छ।
अलग सम्बन्धित मनसाय को वेब
गर्मी ब्लाउज (हुक), रेखाचित्र र सरल मनसाय प्रदर्शन को विवरण लेख्नका धेरै रोचक देखिन्छ अर्को पालना गर्नुहोस्।
यी तत्व विभिन्न आकारहरू को हुन सक्छ:
कुनै पनि फारम को मनसाय।
यो काम जटिलता को एक वृद्धि स्तर द्वारा विशेषता छ: यो मालिकको उपस्थिति ठोस अनुभव, कल्पना र लगनशील भई लागिरहेमा आवश्यक छ।
यो पनि, धेरै सुन्दर गर्मी ब्लाउज (हुक) बाहिर हुनेछ, कुनै पनि ठोस ढाँचाको पूरा गर्न धेरै सजिलो छ, त्यसैले। योजना र वर्णन (ढाँचा "भुईंकतहर", "ब्रश" वा कमर ग्रिड मा गहने) गर्मी उत्पादनहरु को निर्माण सरल।
बुना overalls बच्चा: शुरुआती लागि योजना
को Papier-उसिनेको लागि पेस्ट तयारी गर्दै। सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु को एक चयन
कति अनुभव भइरहेको छैन, आफ्नै हातले एक पोशाक सीना गर्न
कसरी लामो गर्नुपर्छ जाडो लागि गाई घास? सुविधाहरू पशु
फोटो र समीक्षा: स्तन Nipples को सुधार
धर्म के सामाजिक कार्यहरु प्रदर्शन गर्दै छन् (छोटकरीमा)
को गोडा मा तरल पदार्थ: यो कसरी खतरनाक छ?
को जाडो लागि स्वादिष्ट नीलो: व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने सुझाव
सोनिया - जीवन एक असामान्य तरिका संग एक पशु। विवरण र प्रकार
Loutanis3* (ग्रीस / ओ.रोडोस) - तस्बिरहरू, मूल्यहरू र होटल समीक्षाहरू
काजल Maybelline - गुणस्तर, वर्षौंदेखि सिद्ध
बच्चाको लागि राम्रो सुत्न प्रार्थना: प्रभावकारिता र प्रतिक्रिया